မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သောအရာနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုပြproblemsနာများ - လူတစ် ဦး ဦး စားပေးသော၊ ရောဂါကူးစက်မှုဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှု (၂၀၁၆) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
J ကိုပြုမူနေစွဲ. 2016 ဒီဇင်ဘာ;5(4): 614-622 ။ Doi: 10.1556 / 2006.5.2016.079 ။ Epub 2016 နိုဝင်ဘာ 10 ။
Konkolÿ Thege B1,2, Hodgins DC က1, တောရိုင်း TC3.
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ (က) ကြီးမားသောကိုယ်စားလှယ်နမူနာတွင်မျိုးပွားမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ခုတည်း၏ပျံ့နှံ့မှုကိုဖော်ပြရန်နှင့် (ခ) ၀ တ္ထုနှင့်ဆက်နွယ်သောအမူအကျင့်နှင့်စွဲလမ်းမှုပြdistinctနာများကြုံတွေ့နေရသောလူများ၏ကွဲပြားသောအုပ်စုငယ်များကိုဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ကနေဒါနိုင်ငံ၊ အယ်လ်ဘာတာမှဖြေဆိုသူ ၆၀၀၀ ၏ကျပန်းနမူနာသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအရက်၊ ဆေးရွက်ကြီး၊ ဆေးခြောက်နှင့်ကိုကင်းတို့ပါဝင်သောပစ္စည်းလေးမျိုးနှင့်အပြုအမူခြောက်ခု (လောင်းကစား၊ စားသောက်ခြင်း၊ ဈေးဝယ်ခြင်း၊ လိင်၊ ဗီဒီယို) တို့ကိုအကဲဖြတ်သည့်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုများကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ ကစားခြင်းနှင့်အလုပ်) ။ Hierarchical စပျစ်သီးပြွတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း 6,000 ဖြေဆိုသူ (2,728 အမျိုးသမီးများနှင့်ယောက်ျား 1,696 ယောက်ျား၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ subsample အပေါ် Co- ဖြစ်ပေါ်စွဲပြproblemsနာများ၏ပုံစံများခွဲခြားရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်; Mအသက်အရွယ် = ၅၀.၅၂ နှစ်၊ SDအသက်အရွယ် = 13.5 နှစ်) ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကစွဲလမ်းအပြုအမူတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောနှင့်အတူပြproblemsနာများကိုအစီရင်ခံတင်ပြသူ။
စုစုပေါင်းနမူနာတွင်ဖြေဆိုသူ ၄၉.၂% ကသုည၊ ၂၉.၈% ကတစ် ဦး၊ ၁၃.၁% က ၂ ခုနှင့် ၇.၉% သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကစွဲလမ်းမှုသုံးခုနှင့်အထက်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ စပျစ်သီးပြွတ် - သရုပ်ခွဲရလဒ်များ 49.2- အုပ်စုတစ်စုဖြေရှင်းချက်အကြံပြုသည်။ အစုအဝေးအများစု၏အဖွဲ့ဝင်များသည်အမျိုးမျိုးသောစွဲလမ်းမှုပြproblemsနာများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ကစပျစ်သီးပြွတ်အဖွဲ့ဝင်များတွင်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများသည် ၁ (Cluster II: အလွန်အကျွံစားသောအစားအစာအတွက်သာ) နှင့် ၂.၅ (Cluster VII - ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အစာအလွန်စားခြင်းနှင့်အလုပ်များသည့်မကြာခဏပူးတွဲပါ ၀ င်မှုနှင့်အတူကစားခြင်း) ။
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များသည်ယခင်ရလဒ်များကိုပုံတူကူးယူထားခြင်းဖြစ်ပြီးအရွယ်ရောက်သူလူ ဦး ရေ၏ထက်ဝက်ခန့်သည်အနည်းဆုံးအလွန်အကျွံအပြုအမူတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ထားသောနှစ်၌ရုန်းကန်နေရသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းသည်ယခင်လေ့လာမှုများမှတွေ့ရှိခဲ့သောအဆက်မပြတ်စွဲစွဲလမ်းပြွတ်ပြန့်နေခြင်းကိုဖော်ပြသည်။
keywords: ပစ္စည်းဥစ္စာ -related စွဲ, အမူအကျင့်စှဲ, comorbidity, သုခချမ်းသာ, sociodemographic ကွဲပြားခြားနားမှု
လူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်လူ ဦး ရေအဆင့်တွင်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆက်နွှယ်သောကျန်းမာရေးအခြေအနေများသည်ဆေးစွဲခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင်စွဲလမ်းနေသူအတွက်သေဆုံးမှုနှုန်းနှင့်သေဆုံးမှုနှုန်း၊ မိသားစုနှင့်ရပ်ရွာလူထု၏ကျန်းမာရေးနှင့်ဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအတွက်စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးကုန်ကျစရိတ်များမြင့်တက်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။Effertz & မန်း, 2013; McGinnis & Foege, 1999; လူပျို, Robson, Xie, & Rehm, 1998) ။ အထူးသဖြင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါစွဲလမ်းမှုသည်အများဆုံးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများဖြစ်သည်။Sussman, Lisha, & Griffiths, 2011) ။ အယူအဆဆိုင်ရာအယူအဆများ၊ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအမျိုးအစားများကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ငြင်းခုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသော်လည်းဆိုးကျိုးများသိသိသာသာရှိနေသော်လည်း၎င်းတို့သည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုပြproblemsနာများနှင့်ဆင်တူသည်ဟုအများသဘောတူညီမှုထွက်ပေါ်လာသည် (Demetrovics & Griffiths, 2012; Grant, Potenza, Weinstein, & Gorelick, 2010; Karim & Chaudhri, 2012; ရွှံ့ et al ။ , 2011).
လယ်ကွင်းတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှအပြုအမူများတိုးများလာခြင်းကိုစွဲလမ်းမှုအဖြစ်သဘောထားသည်။ ဤရွေ့ကားယခုတရားဝင်မှတ်စွဲမှုအဖြစ်ကျယ်ပြန့်ရှုမြင်ကြသည်အပြုအမူများ [ဥပမာ, လောင်းကစားနှင့်အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲ (ဥပမာ)Hellman, Schoenmaker, Nordstrom, & van Holst, 2013; Wong & Hodgins, 2014)] အငြင်းပွားဖွယ်ရာအပြုအမူများ (ဥပမာရုပ်မြင်သံကြား၊ လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများစွဲစွဲလမ်းမှုအားဖြင့် ()Clarkson & Kopaczewski, 2013; Garcia & Thibaut, 2010; Sussman & Moran, 2013)] အလွန်အမင်းမှန်းဆသော "စွဲလမ်းမှု" [ဥပမာ၊ ချစ်ခြင်း၊Kourosh, Harrington, & Adinoff, 2010; Shulman၊ ၂၀၀၃; Sussman, 2010)] ။ လက်တွေ့ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၊ ဤအပြုအမူများကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်အခန်းကဏ္ obligations ဆိုင်ရာတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများနှင့်ကျန်းမာရေးအကာအကွယ်ပေးသည့်အပြုအမူများအပြင်လူ့အသိုက်အ ၀ န်းပorိပက္ခနှင့် / သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်များရှိသော်လည်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်လျှော့ချခြင်း၏ဖြစ်စဉ်သည်ဤကျယ်ပြန့်သောစိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုပေါင်းစပ်ပေးသောအဓိကလက္ခဏာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုအပြုအမူ (သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းစဉ်) စွဲလမ်းမှုများအဖြစ်ရှုမြင်ရန်ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်။ရွှံ့ et al ။ , 2011).
စွဲလမ်းမှုတစ်ခုတည်းကိုအမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်လေ့မရှိပါ။ ဆေးစွဲသူများကတစ် ဦး ချင်းစီတွင်စွဲလမ်းမှုသည်မကြာခဏပူးတွဲဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီးအပြုအမူတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအခက်အခဲရှိခြင်းမှတစ်ခြားသူနှင့်ရုန်းကန်ခြင်းအထိစနစ်တကျတိုးတက်မှုရှိနိုင်သည်ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။Gossop၊ ၂၀၀၁; Haylett, Stephenson က, & Lefever, 2004) ။ ထို့အပြင်ပြproblemနာတစ်ခုတည်းတွင်သာပြproblemနာရှိနေသောလူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကတွဲဖက်စွဲစွဲနေသည့်သူများသည်သားကောင်ခံခြင်း၊ ဆင်းရဲသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအခြေအနေသို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်းစသည့်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။Rush, Urbanoski, Bassani, Castel, & Wild, 2010) ။ ထို့အပြင်အပြန်အလှန်စွဲမှုများသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်ပြီးတိကျမှန်ကန်သောအကဲဖြတ်မှုနှင့်ထိရောက်သောကုသမှုများကိုလည်းရှုပ်ထွေးစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အလွန်အကျွံအပြုအမူအခြားစွဲဖုံးကွယ်စေခြင်းငှါ, သို့မဟုတ်စွဲအချင်းချင်းအပြန်အလှန်စေခြင်းငှါ (Freimuth et al ။ , 2008).
ဤရွေ့ကားထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသော်လည်း, စွဲကုသမှုပေးသူနှင့်အစီအစဉ်များကိုမကြာခဏ comorbidity ပြissuesနာများ (အထူးသဖြင့် comorbid ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်အပြုအမူစွဲ) စူးစမ်းလေ့လာကြဘူးနှင့်ရလဒ်အဖြစ်အပြိုင်သို့မဟုတ်အဆက်ဆက်အတွက်ပေးအပ်န်ဆောင်မှုများကျော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအားသာချက်ရှိနေသော်လည်းပေါင်းစည်းကြားဝင်မပေးRush et al ။ , 2010) ။ ထပ်မံ၍ ပူးတွဲဖြစ်ပေါ်နေသောစွဲလမ်းမှုနှုန်းမြင့်မားမှုကိုပင်တိုင်စာပေတွင်ဆွေးနွေးထားပြီးဖြစ်သော်လည်းဤအလုပ်၏အများစုသည် ၀ တ္ထုများနှင့်အတူပူးတွဲဖြစ်ပေါ်နေသောပြproblemsနာများကိုအလေးပေးဖော်ပြပြီးအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကိုမကြာခဏဖယ်ထုတ်သည်။
သေးငယ်သောသုတေသနပြုသည့်အဖွဲ့တစ်ခုသည်ပူးတွဲဖြစ်ပေါ်နေသောပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ variable- ဗဟိုပြု (ဆိုလိုသည်မှာအချက် - သရုပ်ခွဲ) ချဉ်းကပ်အသုံးပြုခြင်း, Stephenson က, Maggi, Lefever နှင့် Morojele (1995) လက်တွေ့နမူနာ 16 အလွန်အကျွံအပြုအမူများအကြား Co- ကွိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ စာရေးသူများအနေဖြင့်“ ပျိုးထောင်ခြင်း” (ဥပမာအစာအလွန်အကျွံစားခြင်း၊ ဈေးဝယ်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ အလုပ်နှင့်ကဖိန်းဓာတ်သုံးစွဲခြင်း) နှင့်“ ဟီဒန်ဝါဒ” အချက် (ဥပမာ - အရက်၊ နီကိုတင်း၊ အပန်းဖြေဆေးများ၊ Haylett et al ။ (2004) တူညီသောစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများကို အသုံးပြု၍ ဤတွေ့ရှိချက်များကိုပုံတူကူးယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးအုပ်စုလေးစုကိုတင်ပြခဲ့သည် -“ မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခြင်းပျိုးထောင်ခြင်း” (ဥပမာ၊ အလွန်အကျွံစားခြင်း၊ စျေးဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကဖိန်းဓာတ်သုံးစွဲခြင်း)၊ နှင့်အတင်းအကျပ်ကူညီခြင်း)၊ “ အာရုံခံစားမှု - ရှာဖွေသည့် hedonism” (ဥပမာအပန်းဖြေဆေးများ၊ ဆေးညွှန်းများနှင့်နီကိုတင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်“ ကြီးစိုးမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် hedonism” (ဥပမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လောင်းကစား) အချက်များ။ Lochner et al ။ (2005) လက်တွေ့နမူနာတစ်ခုတွင်အခြားသောအပြုအမူများ / မသန်မစွမ်းမှုများကိုစုံစမ်းခဲ့ပြီး“ ဆုချို့တဲ့မှု” (ဥပမာ trichotillomania၊ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့် hypersexual disorder)၊ “ စိတ်မရှည်နိုင်မှု” (ဥပမာအားဖြင့်ဈေးဝယ်ခြင်း၊ နှင့် (somatoform ရောဂါအပါအဝင်) "somatic" ပြdisနာများ။ အခြားသူများကအလွန်အကျွံအမူအကျင့် ၁၁ ခု၏တွဲဖက်ဖြစ်ပျက်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အခါလူငယ်မဟုတ်သောနမူနာတွင်အုပ်စုနှစ်စုသာရှိသည်ဟုခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည် -“ ယေဘုယျအားဖြင့်စွဲလမ်းမှုမရှိသူ” နှင့်“ ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း၊ ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း” အုပ်စု (ဥပမာ - အလွန်အကျွံလိင်ဆက်ဆံမှု၊ သို့မဟုတ်အင်တာနက်အသုံးပြုရန်) (Sussman et al ။ , 2014).
အသေးစားနှင့် / သို့မဟုတ်အသက်အရွယ်အလိုက်နမူနာများကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဤနယ်မြေတွင်သုတေသနပြုမှုမှာအကန့်အသတ်ရှိသည်။Sussman et al ။ , 2014; Villella et al ။ , 2011; Willoughby, Chalmers, & Busseri, 2004), ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်အမူအကျင့်စွဲပြproblemsနာများ၏ကန့်သတ်လွှမ်းခြုံ (Freimuth et al ။ , 2008; Sussman et al ။ , 2011လူနှင့်ဗဟိုပြု (ဥပမာ - စပျစ်သီးပြွတ်သရုပ်ခွဲ) ချဉ်းကပ်မှုများကိုဆန့်ကျင်။ ) နှင့် variable-centered (ဆိုလိုသည်မှာ factor-analytic) ။ ဤအကန့်သတ်ဖြေရှင်းရန်, ဒီလေ့လာမှု၏ပထမ ဦး ဆုံးရည်ရွယ်ချက်မှာကြီးမားသော, ကိုယ်စားလှယ်နမူနာနှင့်အပြုအမူများနှင့်တ္ထုများကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ခုတည်းသောနှင့်များစွာသောစွဲပြproblemsနာများ၏ပျံ့နှံ့မှုကိုဖော်ပြရန်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မွေးစားခြင်း ရောဂါကူးစက် ပူးတွဲဖြစ်ပေါ်သောစွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများသို့ချဉ်းကပ်မှု (Konkolÿ Thege et al ။ , 2015) ။ Lay epidemiology မှ“ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းပြင်ပရှိလူများ၏အတွေးများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများတွင်လက်ခဏာများ၊ ရောဂါဗေဒ၊ ရောဂါဗေဒနှင့်ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာနယ်ပယ်များ” တွင်ဖော်ပြထားသည်။Davison, Smith, & Frankel, 1991, p ။ ၆) ဤရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ပြည်သူလူထု၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်ပြီးအခိုင်အမာကောက်ယူသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများသည် ၄ ​​င်းတို့သည်အန္တရာယ်များနှင့်မည်သို့ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုမဟာဗျူဟာများကိုမည်သို့ဖော်ထုတ်နိုင်ကြောင်းအရေးကြီးသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးနိုင်ပါသည်။Lawlor, Frankel, Shaw, Ebrahim, & Smith, 2003) ။ ဤလေ့လာမှု၏ဒုတိယရည်မှန်းချက်မှာမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြoneနာတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောလူအုပ်စုများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်နှင့်သီးခြားစွဲလမ်းမှုအစုအဖွဲ့ ၀ င်များသည်လူမှုဗေဒဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာမှုနှင့်မည်သို့ကွာခြားမှုရှိမရှိစူးစမ်းရန်ဖြစ်သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်အယ်လ်ဘာတာစွဲစစ်တမ်းတွင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါ ၀ င်ပြီးတစ်ခုချင်းစီသည်တူညီသောစစ်တမ်းကောက်ယူသည့်ပစ္စည်းများကိုစီမံသည်။ ပထမ ဦး စွာထူထောင်ထားသောသုတေသနအဖွဲ့ (Ipsos Canadian Online Panel) ၏အယ်လ်ဘာတာ (ကနေဒါ) အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဖွဲ့ဝင် (၄၀၀၀) ကိုအွန်လိုင်းစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံသန်းခေါင်စာရင်းအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ပစ်မှတ်ခွဲတမ်းများကိုအသက်၊ ကျား၊ မနှင့်ဒေသများအတွက်သတ်မှတ်ထားပြီး၊ အဖွဲ့ ၀ င်များကိုကိုယ်စားပြုရွေးချယ်ထားသောကျပန်းကိုယ်စားပြုနမူနာများကိုစစ်တမ်းတွင်ပါရန်ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ အသုံးပြုသောနည်းစနစ်၏ repertoire ကိုချဲ့ထွင်ရန်နှင့်အွန်လိုင်းအချက်အလက်ကောက်ယူမှုမှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောဘက်လိုက်မှုဟန်ချက်ညီစေရန်Granello & Wheaton, 2004)၊ ၂၀၁၀ တွင်လူ ဦး ရေအခြေပြုနမူနာ ၂၀၀၀ ၏လူ ဦး ရေအခြေပြုနမူနာကိုကွန်ပျူတာဖြင့် သုံး၍ တယ်လီဖုန်းဖြင့်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စစ်တမ်းနည်းစနစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအခြားနေရာများတွင်ဖော်ပြထားသည် ()Konkolÿ Thege et al ။ , 2015).
ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမ ဦး ဆုံးသုတေသနရည်မှန်းချက်ကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်အွန်လိုင်းနှင့်တယ်လီဖုန်းဖြင့်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုစာရင်းN = 6,000) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ မူရင်းဒေတာဘေ့စ်နှစ်ခုစလုံးသည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်သန်းခေါင်စာရင်းအချက်အလက်များအရဒေသ၊ အသက်နှင့်ကျားမရေးရာဖွဲ့စည်းမှုသည် ၁၈ နှစ်နှင့်အထက်သက်ရှိအယ်လ်ဘာတာလူ ဦး ရေ၏ထင်ဟပ်မှုကိုသေချာစေရန်တွက်ချက်သည်။ (လိင်နှင့် ၀ င်ငွေမှအပ) လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်အလုပ်များ မှလွဲ၍ ပြproblemနာဆိုင်ရာအပြုအမူများဖြစ်ပွားခြင်းသည်အချက်အလက်နှစ်မျိုးလုံးတွင်ကွဲပြားသော်လည်းဤကွဲပြားခြားနားမှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားမှာအနည်းငယ်မျှသာကျဆင်းခဲ့သည်။ တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်မှာအလွန်အကျွံလိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည် V (၀.၁၁) သည်အရေးမကြီး။ သေးငယ်သောသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား၏နယ်နိမိတ်အထက်တွင်ရှိသည်။ ဤနမူနာများတွင်စစ်တမ်းပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများကိုအသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုအခြားနေရာများတွင်အစီရင်ခံခဲ့သည် (Konkolÿ Thege et al ။ , 2015).
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုတိယသုတေသနရည်မှန်းချက်ကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကစွဲလမ်းမှုပြoneနာတစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်ပိုသောအဖြေကိုဖြေကြားသူများပါဝင်သည်။ စုစုပေါင်းနမူနာ (N = ၆,၀၀၀) နှင့်စပျစ်သီးပြွတ်အတွက်အသုံးပြုသောနမူနာကို (n = 2,728; 45.5%) အားလုံးနီးပါး sociodemographic ဝိသေသလက္ခဏာများကိုကွဲပြား; သို့သော်ခြားနားချက်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့အကွာအဝေး (ဇယား) တွင်ထပ်ကျဆင်းခဲ့သည် 1) ။ ထို့အပြင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုခွဲခွဲနမူနာတွင်လူ ၁,၈၅၀ ဦး ကို (နမူနာခွဲများ၏ ၆၇.၈%) ကိုအွန်လိုင်းစစ်တမ်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်စုဆောင်းခဲ့ပြီး ၈၇၈ ယောက် (အပိုဆောင်း ၃၂.၂%) သည်တယ်လီဖုန်းစစ်တမ်းတွင်ပါ ၀ င်သူများဖြစ်ကြသည်။ တယ်လီဖုန်း၏ (n = 2,000, 33.3%) နှင့်အွန်လိုင်း (n = 4,000, 66.6%) နမူနာ - လည်းတယ်လီဖုန်းနှင့်အွန်လိုင်းနမူနာယေဘုယျအားဖြင့်စွဲပျံ့နှံ့မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ဖော်ပြသည်။ စုစုပေါင်းနမူနာ၏ Sociodemographic ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်စပျစ်သီးပြွတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်အသုံးပြုသရုပ်ခွဲ subsample ဇယားထဲမှာအကျဉ်းချုံးထားပါသည် 1.
ဇယား 1. နမူနာများ၏ Sociodemographic ဝိသေသလက္ခဏာများ
စားပွဲတင် 16၏
အနည်းဆုံးစွဲပြproblemနာတစ်ခု (အလေးမထားသော) ဖြင့်နမူနာ။
N (%) /M (SD)
N 6,000 (100.0) 2,728 (100.0)
လိင် χ2 = 123.6, p <.001, Cramer ရဲ့ V = 0.12
အထီး 2,994 (49.9) 1,032 (37.8)
အမြိုးသမီး 3,006 (50.1) 1,696 (62.2)
အသက်အရွယ် 44.5 (15.1) 44.1 (13.5) U = 8741865.5, p = .679, r <.01
ကျောင်းနေပညာရေးဆိုင်ရာ U = 8468646.5, p <.001, r = .04
၉ တန်းသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း (၁) 63 (1.1) 30 (1.1)
အထက်တန်းကျောင်းအချို့ (2) 309 (5.2) 160 (5.9)
အထက်တန်းဒီပလိုမာ (3) 915 (15.3) 454 (16.6)
အချို့တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်နှင့်အလယ်တန်းအဆင့်အရောင်းအ ၀ ယ် / နည်းပညာများ (4) 1,358 (22.7) 660 (24.2)
ကောလိပ်သို့မဟုတ်အလယ်တန်းအဆင့်အရောင်း / နည်းပညာဒီပလိုမာများ (5) 1,537 (25.6) 731 (26.8)
ပြီးစီးခဲ့တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့ (6) 1,110 (18.5) 427 (15.7)
ပြီးစီးသည့်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဂရီ (7) 701 (11.7) 265 (9.7)
အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ χ2 = 25.5, p <.001, Cramer ရဲ့ V = 0.05
လက်ထပ် / ဘုံဥပဒေ 3,995 (66.9) 1,773 (65.2)
ကွဲကွာ / ကွာရှင်း 624 (10.5) 378 (13.9)
မုဆိုးမ 192 (3.2) 87 (3.2)
လူပျို / လက်ထပ်ဘယ်တော့မှမ 1,155 (19.4) 480 (17.7)
အလုပ်အကိုင်အဆင့်အတန်း χ2 = 49.4, p <.001, Cramer ရဲ့ V = 0.07
တစ်ပတ်လျှင်နာရီ ၃၀ ထက်ပိုပြီးအလုပ်လုပ်သည် 3,285 (55.1) 1,474 (54.2)
တစ်ပတ်လျှင်နာရီ ၃၀ အောက်သာအလုပ်လုပ်သည် 637 (10.7) 308 (11.3)
အလုပ်လက်မဲ့သော 355 (5.9) 187 (6.9)
ကြောငျးသား 246 (4.1) 91 (3.3)
အငြိမ်းစား 782 (13.1) 287 (10.6)
မသန်စွမ်းမှုကြောင့်အလုပ်လုပ်မ 242 (4.1) 184 (6.8)
အခြား 417 (7.0) 188 (6.9)
အခွန်မတိုင်မီနှစ်စဉ်အိမ်ထောင်စုဝင်ငွေ U = 6340414.5, p = .067, r = .02
$ 20,000 အောက် (1) 302 (5.9) 148 (6.3)
$ 20,000- $ 29,999 (၂) 318 (6.2) 160 (6.8)
$ 30,000- $ 39,999 (၂) 421 (8.2) 200 (8.6)
$ 40,000- $ 49,999 (၂) 485 (9.4) 230 (9.8)
$ 50,000- $ 59,999 (၂) 504 (9.8) 235 (10.1)
$ 60,000- $ 69,999 (၂) 416 (8.1) 176 (7.5)
$ 70,000- $ 79,999 (၂) 417 (8.1) 185 (7.9)
$ 80,000- $ 89,999 (၂) 406 (7.9) 194 (8.3)
$ 90,000- $ 99,999 (၂) 406 (7.9) 174 (7.4)
ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ နှင့်အထက် (၁၀) 1,459 (28.4) 636 (27.2)
စစ်တမ်းတွင်ပါဝင်သူများ၏လိင်၊ အသက်၊ ပညာရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ၊ 1 ဤလူမှုပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအတွက်တုန့်ပြန်မှုရွေးချယ်မှုများကိုဖော်ပြထားသည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအချို့မှာတော့ sociodemographic variable တွေကိုရှင်းလင်းပြတ်သားတိုးတက်လာဖို့နည်းပါးလာအမျိုးအစားသို့ recoded ခဲ့ကြသည် (ဇယား 3) ။ စစ်တမ်းတွင်ပါဝင်သူ (၄) ဦး (အရက်၊ ဆေးလိပ်၊ ဆေးခြောက်နှင့်ကိုကင်းသုံးစွဲမှု) နှင့်အပြုအမူ (၆) ခု (ပြaticနာရှိသောလောင်းကစားခြင်း၊ စားခြင်း၊ ဈေးဝယ်ခြင်း၊ လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူ၊ စစ်တမ်း mode ကို၏။ Lay epidemiology အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အလေးထားမှုနှင့်အညီ၊ ဆိုလိုသည်မှာကျွမ်းကျင်သူမှဆင်းသက်လာသည့်လက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများထက်စွဲလမ်းမှုပြproblemsနာများနှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူ၏အမြင်များ (Konkolÿ Thege et al ။ , 2015) ပြproblemနာတစ်ခုစီအတွက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပေးခဲ့သည် (ဇယား 2တုံ့ပြန်မှုတုံ့ပြန်မှုကိုရှောင်ရှားရန်ဟူသောဝေါဟာရကို "စွဲ" ကိုအသုံးမပြုဘဲပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အပြုအမူများအတွက် Self- စွပ်စွဲ "ပြproblemsနာများ" ကိုသတ်မှတ်ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့သော)) ။ ပါဝင်သည့်အလွန်အကျွံအပြုအမူများဖြစ်ပွားမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်မေးခွန်းတစ်ခု (“ သင်၏ဘဝကိုပြန်လည်စဉ်းစားခြင်း၊ သင်ကိုယ်တိုင် [ပြbehaviorနာအပြုအမူ] နှင့်ပြaနာရှိသောအပြုအမူများ”) တွင်ပြ?နာရှိခဲ့သလား?”) မေးခွန်းတစ်ခုကိုရရှိနိုင်သည့်တုန့်ပြန်မှုအမျိုးအစား (“ မဟုတ်ပါ”)၊ ပြီးခဲ့သည့် ၁၂ လအတွင်းမှမဟုတ်ဘဲ၊ ဟုတ်ကဲ့၊ လွန်ခဲ့သော ၁၂ လတွင်) ။ ဒီလေ့လာမှုမှာငါတို့ဟာအတိတ်ကာလအပြုအမူတွေကိုတွဲဖက်ဖြစ်ပျက်မှုကိုသာအာရုံစိုက်ခဲ့ကြလို့ပထမဆုံးတုံ့ပြန်မှုရွေးချယ်မှုနှစ်ခုပြိုလဲခဲ့ပါတယ်။
ဇယား ၂။ ဖြေဆိုသူများအားပေးသောပြproblemနာအပြုအမူ၏အဓိပ္ပါယ်
စားပွဲတင်26 ၏
အရက် “ အရက်ပြproblemနာ” ဆိုသည်မှာဘီယာ၊ ဝိုင်နှင့် / သို့မဟုတ်အရက်ကိုအလွဲသုံးခြင်းဖြစ်သည်။
ဆေးရွက် “ ဆေးရွက်ကြီးပြproblemနာ” ဆိုသည်မှာစီးကရက်၊ ဆေးပြင်းလိပ်၊ ဝါး၊
ဆေးခြောက် “ ဆေးခြောက်ပြproblemနာ” ဆိုသည်မှာဆေးခြောက်၊ hashish၊ hash oil, weed, မြက်သို့မဟုတ်အိုးကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
ကိုကင်း “ ကိုကင်းပြproblemနာ” ဆိုသည်မှာအက်ကွဲခြင်း၊ အမှုန့်ကိုကင်း၊
လောင်းကစား လောင်းကစားပြproblemနာဆိုသည်မှာဂိမ်းစက်များ၊ အွန်လိုင်းလောင်းကစားများ၊ လောင်းကစားရုံများ၊ ထီများ၊ ခြစ်ရာလက်မှတ်များနှင့်ဘဝအတွက်ပြproblemsနာများဖြစ်စေသောအခြားငွေများအတွက်လောင်းခြင်းများကိုဆိုလိုသည်။
စား “ စားသောပြproblemနာ” ဆိုသည်မှာ၎င်းသည်အလွန်နည်းသည်ဖြစ်စေ၊ နည်းလွန်းသည်ဖြစ်စေအစာနှင့်ဆက်စပ်သောမည်သည့်ပြproblemsနာကိုမဆိုဆိုလိုသည်။
စျေးဝယ် “ စျေးဝယ်ခြင်းပြproblemနာ” ဆိုသည်မှာဘဝတွင်ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြင့်စျေးဝယ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
လိင် “ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြသနာ” ဆိုသည်မှာလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဘဝပြonlineနာများဖန်တီးရန်နှင့်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်းဖြစ်စေညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမသင့်လျော်စွာအသုံးပြုခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
ဗွီဒီယိုဂိမ်းများ “ ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းပြproblemနာ” ဆိုသည်မှာဘဝပြproblemsနာများဖန်တီးသည့် X-Box, Wii, PlayStation နှင့်အခြားအွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းများကဲ့သို့သောဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
အလုပ် “ အလုပ်နှင့်ပြProbleနာ” ဆိုသည်မှာဘဝတွင်ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေသောနည်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဇယား ၃။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံသည့်စွဲလမ်းမှုပြproblemsနာများနှင့်စပ်လျဉ်း။ လူမှုဗေဒဆိုင်ရာလက္ခဏာများ (N = ၂၀6,000)
စားပွဲတင်36 ၏
လိင်, N (%)
အထီး 1,306 (48.6) 791 (48.1) 358 (50.6) 228 (55.3) χ2 = 8.0, p = .047, Cramer ရဲ့ V = 0.04
အမြိုးသမီး 1,382 (51.4) 854 (51.9) 350 (49.4) 184 (44.7)
အသက်, M (SD) 46.7 (15.9) 44.5 (14.3) 41.7 (13.2) 36.9 (12.4) Kruskal-Wallis χ2 = 195.6, p <.001
အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ, N (%)
ပူးပေါင်း 1,925 (72.0) 1,071 (65.4) 442 (62.6) 245 (59.5) χ2 = 60.7, p <.001, Cramer ရဲ့ V = 0.08
ကွဲကွာခြင်းသို့မဟုတ်ကွာရှင်းခြင်း 318 (11.9) 257 (15.7) 107 (15.2) 52 (12.6)
တခုတည်းသော 432 (16.1) 309 (18.9) 157 (22.2) 115 (27.9)
ပညာရေး, N (%)
အထက်တန်းကျောင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း 521 (19.4) 363 (22.1) 157 (22.2) 132 (32.0) χ2 = 34.7, p <.001, Cramer ရဲ့ V = 0.08
ကောလိပ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို 2,167 (80.6) 1,283 (77.9) 551 (77.8) 280 (68.0)
အလုပ်အကိုင် N (%)
အချိန်ပြည့်သို့မဟုတ်အချိန်ပိုင်း 1,709 (63.8) 1,092 (66.6) 470 (66.6) 297 (71.9) χ2 = 12.0, p = .007, Cramer ရဲ့ V = 0.05
အခြားသူများ 968 (36.2) 547 (33.4) 236 (33.4) 116 (28.1)
ဝင်ငွေခွန်, M (SD) 6.8 (2.9) 6.5 (3.0) 6.2 (3.1) 5.9 (3.2) Kruskal-Wallis χ2 = 49.1, p <.001
သုခချမ်းသာ M (SD) 60.8 (11.2) 55.6 (12.4) 52.2 (12.7) 48.0 (14.4) Kruskal-Wallis χ2 = 623.8, p <.001
ဖြေဆိုသူ၏ယေဘုယျသုခချမ်းသာကိုအကဲဖြတ်ရန်၊ ရှစ်ယောက်မြောက်ကိုယ်ပိုင်သာယာဝပြောရေးညွှန်းကိန်း (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသာယာဝပြောရေးအဖွဲ့၊ ၂၀၀၆) အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ဤအတိုင်းအတာတွင်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုရှစ်ခုပါရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီသည် ၁၁ ချက်မှတ်ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည် (၀ = လုံးဝမကျေနပ်၊ ၅ = ကြားနေ၊ ၁၀ = လုံးဝကျေနပ်မှု) ။ လူနေမှုအဆင့်အတန်း၊ ကျန်းမာရေး၊ ဘဝတွင်အောင်မြင်မှု၊ ဆက်ဆံရေး၊ လုံခြုံမှု၊ အနာဂတ်လုံခြုံရေးနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာ။ စကေး၏ internal ကိုက်ညီမှုပစ္စုပ္ပန်နမူနာ (Cronbach ရဲ့α = 11) တွင်အလွန်ကောင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်းများသည် SPSS 23.0 (SPSS, Chicago, IL, USA) ကို အသုံးပြု၍ ကွပ်မျက်ခဲ့သည်။ Chi-square စမ်းသပ်မှုများကို Cramer ကိုအသုံးပြုပြီးအမျိုးအစား၊ လူမှုရေးနှင့်လူမှုရေးအခြေအနေများ (ဥပမာ - လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ) ကို ဖြတ်၍ အတိတ်နှစ်၏ပြproblemနာအပြုအမူများ၊ မဟုတ်၊ တစ်၊ V အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားတွက်ချက်ရန်။ ပုံမှန်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြန့်ဝေထားသောစဉ်ဆက်မပြတ်လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများ (ဥပမာ၊ အသက်နှင့် ၀ င်ငွေ) နှင့်အုပ်စုများ၏ကောင်းကျိုးများကို parametric မဟုတ်သည့် Kruskal-Wallis စာမေးပွဲကို အသုံးပြု၍ နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ တစ် ဦး က multinomial ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလည်း sociodemographic variable တွေကိုနှင့်သုခချမ်းသာရမှတ်များနှင့်စပျစ်သီးပြွတ်အဖွဲ့ဝင်အကြားအသင်းအဖွဲ့များမော်ဒယ်မှ run ခဲ့သည်။
ပူးတွဲဖြစ်ပေါ်စွဲလမ်းမှုပုံစံများကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်အတွက်ဝေးလံသောမက်ထရစ်ကိုယူကလီးဒန်းအကွာအဝေးနှင့်အတူ Ward ၏နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု၍ Hierarchical Cluster analysis ။ ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ပြtheနာအပြုအမူတစ်ခုချင်းစီ၏မရှိခြင်းအတိတ်တစ်နှစ်ရှိနေခြင်းနှင့်အတိတ်တစ်နှစ်ရှိနေခြင်းကိုညွှန်ပြ variable တွေကို 10 ခဲ့ကြသည်။ သိမ်းဆည်းရန်ပြွတ်သိပ်ထားသည့်အစုအရေအတွက်စုစည်းမှုအချိန်ဇယားကိန်းအတွက်အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုကိုရှာရန်ချဉ်းကပ်မှုအပေါ်အခြေခံသည် [cf. “ စည်းကမ်းချက်များကိုရပ်တန့်ခြင်း” (Clatworthy, Buick, Hankins, Weinman, & Horne, 2005)] ။ အုပ်စုဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များကို chi-square နှင့် Kruskal-Wallis စစ်ဆေးမှုများကို အသုံးပြု၍ လူမှုဗေဒဆိုင်ရာနှင့်သုခချမ်းသာလက္ခဏာများကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။
လေ့လာမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဟယ်လ်စင်ကီကြေငြာချက်နှင့်အညီပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အယ်လ်ဘာတာကျန်းမာရေးသုတေသနကျင့်ဝတ်ဘုတ်အဖွဲ့ကအဆိုပါလေ့လာမှုကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များအားလုံးကိုလေ့လာမှုအကြောင်းအသိပေးပြီးအားလုံးသည်အသိပေးသဘောတူညီချက်ပေးခဲ့သည်။
စစ်တမ်းဖြေဆိုသူ ၆၀၀၀ ၏ပါဝင်သူထက်ဝက်ကျော် (၅၀.၈%) သည်လေ့လာမှုမတိုင်မီ ၁၂ လအတွင်းလေ့လာခဲ့သည့် ၀ တ္ထုများနှင့်အပြုအမူများနှင့်ပြaနာတစ်ခုကြုံတွေ့ရကြောင်းဖြေကြားခဲ့သည် (ဖြေဆိုသူတစ် ဦး ချင်း၏စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများ) ကြည့်ရှု, တခြားနေရာဖော်ပြထားခဲ့သည် Konkolÿ Thege et al ။ , 2015) ။ သုံးပုံတစ်ပုံခန့် (၂၉.၈%) သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ကပစ္စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အပြုအမူတစ်ခုတည်းနှင့်သာပြwithနာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၁၃.၁% သည်ပြtwoနာနှစ်ခုကိုဖော်ပြခဲ့ပြီး ၇.၉% သည်လေ့လာမှုမတိုင်မီတစ်နှစ်တွင်အရာဝတ္ထုနှင့်အပြုအမူသုံးခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောပြသနာများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤအုပ်စုများမှအဖွဲ့ဝင်များသည်လူမှုဗေဒဆိုင်ရာလက္ခဏာများအားလုံးနှင့်သုခချမ်းသာရရှိမှုနှင့်သိသိသာသာကွဲပြားကြသည် (ဇယား 3).
sociodemographic variable များထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသောအခါဖြေဆိုသူများသည်ပြ,နာတစ်ခု၊ နှစ်ခု၊ သုံးခု (သို့) သုံးခုကျော်ရှိမရှိကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသည့် multinomial logistic regression model သို့ရောက်ရှိခြင်း (ရည်ညွှန်းအုပ်စု = ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကစွဲလမ်းမှုပြသနာများကိုမဖော်ပြသည့်ဖြေဆိုသူ)၊ သာတသမတ်တည်းသိသာခန့်မှန်း (အလွန်အကျွံအပြုအမူများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေလျော့နည်းသွားနှင့်အတူဆက်စပ်တစ်ခုချင်းစီကို); လိင်၊ ပညာရေးအောင်မြင်မှုနှင့်အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေသည်အဖွဲ့ ၀ င်များနှင့်ရံဖန်ရံခါဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသည်တစ် ဦး၊ တစ် ဦး၊ နှစ် ဦး နှင့်စွဲလမ်းမှုပြproblemsနာသုံးခုသို့မဟုတ်ထိုထက်မကသောအုပ်စုများကိုခွဲခြားရာတွင်အခန်းကဏ္ have မှမရှိပုံရသည် (ဇယား) 4).
ဇယား ၄။ တစ် ဦး၊ နှစ် ဦး၊ သုံး ဦး သို့မဟုတ်သုံး ဦး ထက်ပိုသောစွဲလမ်းမှုပြversusနာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ အစီရင်ခံခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးသည့် multinomial ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆုတ်ယုတ်မှု၏ရလဒ်များ (၉၅% ယုံကြည်မှုကြားကာလများနှင့်အလေးသာမှုအချိုး)
စားပွဲတင်46 ၏
ဇယား ၄။ တစ် ဦး၊ နှစ် ဦး သို့ (သို့) သုံးခုသို့မဟုတ်သုံးခုထက်ပိုသောစွဲလမ်းမှုပြသနာများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားတင်ပြသည့် multinomial ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆုတ်ယုတ်မှု၏ရလဒ်များ (၉၅% ယုံကြည်မှုကြားကာလများနှင့်အလေးသာမှုအချိုး)
နှစ် ဦး စွဲပြproblemsနာများ
အထီး 0.97 (0.84-1.12)a 1.17 (0.97-1.41)a 1.34 (0.97-1.41) *
အမြိုးသမီး 1.00 1.00 1.00
အသက်အရွယ် 0.99 (0.99-1.00) *** 0.98 (0.97-0.99) *** 0.95 (0.94-0.96) ***
ပူးပေါင်း 1.09 (0.88-1.34)a 1.07 (0.82-1.39)a 1.30 (0.95-1.78)a
ကွဲကွာခြင်းသို့မဟုတ်ကွာရှင်းခြင်း 1.50 (1.14-1.96) ** 1.32 (0.93-1.87)a 1.36 (0.86-2.14)a
တခုတည်းသော 1.00 1.00 1.00
အထက်တန်းကျောင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း 1.04 (0.87-1.25)a 1.10 (0.87-1.38)a 1.67 (1.28-2.19) ***
ကောလိပ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို 1.00 1.00 1.00
အချိန်ပြည့်သို့မဟုတ်အချိန်ပိုင်း 1.10 (0.94-1.29)a 1.05 (0.85-1.30)a 1.25 (0.95-1.64)a
အခြားသူများ 1.00 1.00 1.00
ဝငျငှေ 1.00 (0.97-1.03)a 0.98 (0.95-1.02)a 0.98 (0.93-1.02)a
သုခချမ်းသာ 0.96 (0.96-0.97) *** 0.94 (0.94-0.95) *** 0.92 (0.91-0.93) ***
*p <.05, **p <.01, ***p <.001
သီးပြွတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ရလဒ်များကိုခုနစ်စပျစ်သီးပြွတ်ဖြေရှင်းချက်အကြံပြုသည်။ စားပွဲတင်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း 5ပထမ ဦး ဆုံးအစုအဝေး (အစုအဝေးကိုလုပ်ဆောင်သည့်အခါအသုံးပြုသောနမူနာ ၂၆.၀%) သည်ဆေးလိပ်သောက်သူများကို၎င်းတို့၏ပြproblemနာအပြုအမူအဖြစ်ကိုယ်စားပြုသည်။ ဒုတိယအစုအဝေး (၂၁.၈%) တွင်ပါဝင်သူများ၌အလွန်အကျွံစားသောအစားအစာကိုသူတို့၏ပြproblemနာအပြုအမူအဖြစ်ဖော်ပြသည်။ တတိယအစုအဝေး (၁၆.၂%) သည်အလုပ်ပြproblemsနာများရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုကိုယ်စားပြုပြီးစတုတ္ထအစုအဝေး (၁၃.၀%) တွင်ကွဲပြားသောစွဲလမ်းမှုပြproblemsနာများစွာကိုရှင်းလင်းစွာလွှမ်းမိုးသောအပြုအမူမရှိဘဲပါဝင်သူများပါဝင်သည်။ ပဉ္စမအစုအဝေး (၉.၅%) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအလွန်အကျွံပြုမှုကိုတင်ပြသောလူများအားအဓိကအားဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်။ ဆsix္ဌ (၈.၉%) နှင့်သတ္တမ (၄.၇%) အစုစုသည်စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သူများဖြစ်ကြသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ကစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူအမြင့်ဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသူများ (Cluster VII) တွင်အများဆုံးတွေ့ရှိရပြီးအနိမ့်ဆုံးစားသူအလွန်အကျွံစားသူများ (Cluster II) တွင်တွေ့ရှိရသည်။ စပျစ်သီးပြွတ်တစ်ခုစီ၏စွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည် 5.
ဇယား ၅။ စွဲလမ်းခြင်းပြinနာတစ်ခုစီ၏ပြbehaviorနာတစ်ခုစီ၏ပျံ့နှံ့မှု (%) (n = ၂၀2,728)
စားပွဲတင်56 ၏
အစုအဖွဲ့ I (n = ၂၀708) 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1 0.0 17.7 1.4 (0.6)
Cluster II (n = ၂၀596) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 1.0 (0.0)
Cluster III (n = ၂၀441) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3 0.0 100.0 1.3 (0.4)
Cluster IV (n = ၂၀354) 54.7 42.2 28.9 7.8 23.2 9.4 4.9 26.0 6.2 24.5 2.3 (1.1)
စပျစ်သီးပြွတ် V (n = ၂၀259) 13.6 22.9 5.8 4.4 5.8 15.3 4.4 35.4 99.7 38.6 2.3 (1.6)
စပျစ်သီးပြွတ် VI (n = ၂၀243) 0.9 20.3 0.0 0.0 6.0 100.0 7.3 50.9 2.2 31.9 2.1 (1.0)
Cluster VII (n = ၂၀127) 1.2 31.1 13.5 0.6 12.3 4.9 100.0 36.6 14.0 37.2 2.5 (1.3)
မှတ်စု။ Alc: ပြaticနာအရက်သုံးစွဲမှု၊ Tob: ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှုပြproblemsနာများ၊ မတ် - ဆေးခြောက်သုံးခြင်းပြproblemsနာများ၊ Coc: ပြproblemနာကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း၊ Gamble: လောင်းကစားခြင်းပြproblemsနာ၊ ဆိုင် - စျေး ၀ ယ်ထွက်ခြင်း၊ ဗီဒီယို - ပြproblemနာရှိတဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်း၊ စား - ပြeatingနာကိုစားခြင်း၊ အပြုအမူနှင့်အလုပ် - အလွန်အကျွံအလုပ်။
aလွန်ခဲ့သောနှစ်ကစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူအရေအတွက်ကိုပေးထားသည် M (SD).
အစုအဝေးတစ်ခုစီ၏အသေးစိတ်လူမှုဗေဒဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည် 6။ အစုအဖွဲ့ ၀ င်သည်လိင်နှင့်သိသိသာသာဆက်နွယ်သည်။ ယောက်ျားလေးအချိုးသည် ၃၄.၉%၊ ၂၇.၇%၊ ၄၀.၆%၊ ၄၇.၇%၊ ၆၄.၁%၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေသည်လည်းစပျစ်သီးပြွတ်အဖွဲ့ ၀ င်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သမားရိုးကျအဆင့် (ပညာရေးအောင်မြင်မှု) သို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြန့်ဝေထားသောအဆက်မပြတ်လူမှုဗေဒဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများ (အသက်နှင့် ၀ င်ငွေ) အားလုံးသည်စပျစ်သီးပြွတ်အဖွဲ့ ၀ င်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်စပျစ်သီးပြွတ်အဖွဲ့ဝင်များသည်သုခချမ်းသာနှင့်သိသိသာသာကွဲပြားမှုရှိခဲ့သည်။ အလွန်အကျွံဝယ်ယူသူများ၊ ဆေးလိပ်သောက်သူ၊ လိင်စွဲလမ်းသူနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုပြတ်လပ်သူများအစုအဖွဲ့များသည်ရှင်းလင်းစွာပြသခဲ့သည် (ထပ်တူကျခြင်းမရှိသောယုံကြည်မှုကြားကာလများမှဖော်ပြသည်) ။ - "workaholics" နှင့် "အလွန်အကျွံစားသုံးသူများ" ထက်ရမှတ်များပိုများလာသည် (ပုံ 1).
ဇယား (၆) ။ စပျစ်သီးပြွတ်အသင်း ၀ င်နှင့်ပတ်သက်သောလူမှုဗေဒဆိုင်ရာလက္ခဏာများ (n = ၂၀2,728)
စားပွဲတင်66 ၏
Cluster III ကို
အထီး 247 (34.9) 165 (27.7) 179 (40.6) 169 (47.7) 166 (64.1) 50 (20.6) 56 (44.1) χ2 = 153.7, p <.001, Cramer ရဲ့ V = 0.24
အမြိုးသမီး 461 (65.1) 431 (72.3) 262 (59.4) 185 (52.3) 93 (35.9) 193 (79.4) 71 (55.9)
အသက်, M (SD) 45.9 (12.5) 49.4 (13.4) 42.9 (12.1) 42.8 (13.8) 46.9 (13.6) 41.1 (14.1) 38.1 (14.3) Kruskal-Wallis χ2 = 130.0, p <.001
ပူးပေါင်း 465 (65.9) 413 (69.5) 283 (64.5) 197 (56.1) 181 (69.9) 157 (64.6) 77 (61.1) χ2 = 50.6, p <.001, Cramer ရဲ့ V = 0.10
ကွဲကွာခြင်းသို့မဟုတ်ကွာရှင်းခြင်း 138 (19.5) 99 (16.7) 77 (17.5) 72 (20.5) 37 (14.3) 30 (12.3) 12 (9.5)
တခုတည်းသော 103 (14.6) 82 (13.8) 79 (18.0) 82 (23.4) 41 (15.8) 56 (23.0) 37 (29.4)
အထက်တန်းကျောင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း 204 (28.8) 128 (21.5) 66 (15.0) 114 (32.2) 55 (21.2) 44 (18.1) 33 (26.0) χ2 = 50.2, p <.001, Cramer ရဲ့ V = 0.14
ကောလိပ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို 504 (71.2) 468 (78.5) 375 (85.0) 240 (67.8) 204 (78.8) 199 (81.9) 94 (74.0)
အချိန်ပြည့်သို့မဟုတ်အချိန်ပိုင်း 459 (64.9) 350 (59.0) 354 (80.8) 239 (67.5) 171 (66.0) 145 (59.7) 64 (51.2) χ2 = 72.3, p <.001, Cramer ရဲ့ V = 0.16
အခြားသူများ 248 (35.1) 243 (41.0) 84 (19.2) 115 (32.5) 88 (34.0) 98 (40.3) 61 (48.8)
ဝင်ငွေခွန်, M (SD)a 6.1 (2.9) 6.6 (3.0) 7.0 (3.0) 6.2 (3.2) 6.5 (2.9) 6.4 (3.2) 5.6 (3.0) Kruskal-Wallis χ2 = 33.8, p <.001
သုခချမ်းသာ M (SD) 52.7 (12.8) 56.7 (13.1) 55.5 (11.8) 49.7 (13.9) 52.0 (14.6) 50.9 (14.9) 52.4 (12.5) Kruskal-Wallis χ2 = 96.0, p <.001
ပုံ (၁) ပြန့်နှံ့နေသောပြန့်နှံ့ပေါင်း ၇ ခုရှိကိုယ်ပိုင်သာယာဝပြောရေးညွှန်းကိန်း၏ 1% ယုံကြည်မှုကြားကာလများ
စွဲလမ်းစေသောရောဂါများစွာအတွက်ပေါင်းစပ်ကုသမှုသည်အရေးကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မူးယစ်ဆေးစွဲစွဲလမ်းမှုပြproblemsနာများကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ကုသရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, 2009) ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကုသမှုပေးသူများသည်အလေ့အကျင့်စွဲလမ်းမှုနည်းပါးသော၎င်းတို့၏လေ့ကျင့်မှု၏အာရုံနှင့်ကိုက်ညီသောရောဂါများကိုအသိအမှတ်ပြုရန်အများအားဖြင့် (Freimuth et al ။ , 2008) ။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဆေးစွဲသူများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုရေးဆွဲသူများအားပုံမှန်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ဆေးဝါးနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများသည်မည်မျှပူးပေါင်းပါ ၀ င်သည်ဟူသောနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များပေးရန်ဖြစ်သည်။
စွဲလမ်းမှုပြproblemsနာများ၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အချက်အလက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ လူကြီးလူ ဦး ရေ၏ထက်ဝက်ခန့်သည်တစ်နှစ်အတွင်းအနည်းဆုံးအလွန်အကျွံအပြုအမူတစ်ခုနှင့်ရုန်းကန်နေရသည်ဟုဖော်ပြသည် (Sussman et al ။ , 2011) ။ လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရလဒ်များအရအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူ ဦး ရေ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူတစ်ခုတွင်အခက်အခဲရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အပို ၂၁% ကမူအပြုအမူနှစ်မျိုး (သို့) အရာဝတ္ထုနှစ်ခုနှင့်တစ်ခုထက်ပိုသောပြproblemsနာများရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ လူအများတို့ကအချို့သောစွဲလမ်းမှုပုံစံများကိုမကြာခဏပူးတွဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်မှီခိုမှုအတွက်တာဝန်ရှိသောအခြေခံစွဲချက်မဟုတ်သောသတ်သတ်မှတ်မှတ်သိသာမှုရှိခြင်းကိုအကြံပြုသည်။Shaffer et al ။ , 2004), လက်ရှိဒေတာ - စွဲလမ်းပြproblemsနာများအစီရင်ခံသောသူတို့အားနီးပါး 60% အပြုအမူတစ်ခုတည်းနှင့်အတူအခက်အခဲများရှိကွောငျးဖျောပွ - ဤစွဲ၏ဤရောဂါလက္ခဏာများအတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထောက်ခံမှုမပေးပါဘူး။ သို့သော်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ကအလွန်အကျွံအပြုအမူတစ်ခုတည်းကိုသာအစီရင်ခံသူများစွာသည်အခြားဒေသများတွင်ပြproblemsနာများကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်နိုင်သော်လည်းတစ်ပြိုင်နက်တည်းတွင်အစားထိုးခြင်းဖြစ်နိုင်သည် (cf. စွဲအစားထိုးခြင်း / အပြန်အလှန်စွဲခြင်း၊ ဂျွန်ဆင်, 1999).
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များအရလေ့လာခဲ့သောအလွန်အကျွံပြုမူသောအပြုအမူပုံစံများသည်ယခင်လေ့လာမှုများတွင်ဖော်ပြခဲ့သောအုပ်စုများသို့မဟုတ်အတိုင်းအတာများထက် (၂-၄) ပိုမိုများပြားသော Cluster ခုနစ်ခုဖြေရှင်းချက်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့ရှိရပါသည်။Haylett et al ။ , 2004; Lochner et al ။ , 2005; MacLaren & အကောင်းဆုံး၊ ၂၀၁၀; Stephenson က et al ။ , 1995; Sussman et al ။ , 2014) ။ သို့သော်မှတ်သားထိုက်သည်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင်ရလဒ်များကိုတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းကြောင့်လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်သောဆေးစွဲမှုအရေအတွက်နှင့်အမျိုးအစားနှင့်အသုံးပြုသောစာရင်းအင်းဆိုင်ရာနည်းစနစ်များ (အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ စပျစ်သီးပြွတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ငုပ်လျှိုးနေသည့်လူတန်းစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း) နှင့်ပြstudyနာများစွာရှိသည်။ စွဲ) တိုင်းတာခြင်းအကြေးခွံအကြားဆက်စပ်မှု) ။
ဤလေ့လာမှု၏အားသာချက်တစ်ခုမှာလိင်၊ အသက်အရွယ်နှင့်ဒေသအနှံ့အရွယ်ရောက်အယ်လ်ဘာတာလူ ဦး ရေကိုလွတ်လပ်သောအတော်လေးကြီးမားသောကနေဒါနမူနာများ၏ကိုယ်စားလှယ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်အားသာချက်မှာမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှစ်မျိုးလုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းအကဲဖြတ်ခြင်း၊ စွဲခြင်းနယ်ပယ်တစ်ခုလုံးကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းများကိုပေးသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, မီးမောင်းထိုးပြထိုက်သောလက်ရှိသုတေသန၏ကန့်သတ်အများအပြားရှိခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာစစ်တမ်းပုံစံနှစ်မျိုးလုံးတွင်တုန့်ပြန်မှုနှုန်းသည်အတော်အတန်နိမ့်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုယေဘူယျအားဖြင့်အားနည်းစေသည် (Konkolÿ Thege et al ။ , 2015) ။ ထို့အပြင်ပြproblemနာရှိသောစွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများကိုအကဲဖြတ်ရန်မေးခွန်းတစ်ခုကိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ရောဂါကုသရေးစစ်တမ်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ဘိုးလင်း၊; ကွတ်, 1987), Single-item ကိုအကြေးခွံ၏ယုံကြည်စိတ်ချရ Multi- ကို item အကြေးခွံ၏ယေဘုယျအားဖြင့်အားနည်းသည်။ ယခင်လေ့လာမှုများအရအလွန်အကျွံအပြုအမူတစ်ခုအတွက်မေးခွန်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့်မိမိကိုယ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည်စွဲလမ်းစေသောရောဂါရှိသူများကိုဖော်ထုတ်ရာတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်လက်တွေ့ကျသောအဓိပ္ပါယ်ရှိသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြသော်လည်းဤလေ့လာမှုများသည်ဆေးစွဲမှု၊ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုအာရုံစိုက်သည်။ကွတ်, 1987; ရှငျဘုရငျ, Delfabbro, & Griffiths က, 2013; Widyanto, Griffiths, & Brunsden, 2011) ။ ထို့ကြောင့်ဤအကဲဖြတ်နည်းလမ်း၏အပြုအမူဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအားလုံးနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်နည်းလမ်းမှာယေဘူယျအားဖြင့်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်သည်။
တစ်ခုတည်းပစ္စည်းများ၏အသုံးအနှုန်းများ၏တရားဝင်မှုကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာအပြုအမူတစ်ခုစီ၏အတိုချုပ်အပြုအမူကိုဖော်ပြရန်နှင့်ပျက်စီးမှုကိုအလေးပေးသောတုံ့ပြန်မှုတုံ့ပြန်မှုကိုလျှော့ချရန်စွဲလမ်းမှုကဲ့သို့သောအသုံးအနှုန်းများကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ သင်တန်းသားများကိုဤပစ္စည်းများကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူဒီလေ့လာမှုမှာဆန်းစစ်မခံခဲ့ရ, ထိုသို့အချို့သောဖြစ်ရပ်များတွင်ချို့ယွင်းကျယ်ပြန့်သတ်မှတ်ခဲ့ဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်“ ပြproblemနာရှိသောအစာ” သည်ဖြေဆိုသူများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောအစားအစာစွဲသူများအလွန်အကျွံစားရုံသာမက anorexics ၏ကန့်သတ်ထားသောအပြုအမူပုံစံများပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ယင်း၏အဖျက်သဘောသဘာဝသည်လက်ရှိ nosological စနစ်များတွင်စွဲလမ်းမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းမခံရပေ။
ဤအကန့်သတ်ချက်များရှိနေသော်လည်းဤလေ့လာမှုသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါတစ်ချိန်တည်းတွင်စွဲလမ်းနေသည့်ရောဂါများစွာခံစားနေရသောလူအမြောက်အများကိုအထူးဂရုပြုရန်နှင့်ပေါင်းစပ်ကုသမှုနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုရန်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတောင်းဆိုသည်။ ဤလုပ်ငန်းသည်စွဲရောဂါလက္ခဏာများတင်ပြသောလူနာများအားတိကျမှန်ကန်သောအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းတို့တွင်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်၊ ကျွမ်းကျင်သူများအား၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကအစပိုင်းတွင်အလေးထားပြောကြားခဲ့သည့်အရာများနှင့်တွဲဖက်သောအရာ ၀ တ္ထုများနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများဖြစ်နိုင်ချေကိုစဉ်းစားရန်ပညာရှင်များကိုအားပေးသည်။
TCW နှင့် DCH သည်လေ့လာမှုကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပြီး protocol ကိုရေးသားခဲ့သည်။ BKT သည်စာပေရှာဖွေမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးယခင်သုတေသနလေ့လာမှုအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့သည်၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်သည်။ စာရေးသူအားလုံးကနောက်ဆုံးလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ စာရေးသူအားလုံးသည်လေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုအပြည့်အဝရယူနိုင်ခဲ့ပြီးအချက်အလက်များ၏သမာဓိရှိမှုနှင့်အချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၏တိကျမှုအတွက်တာ ၀ န်ယူခဲ့သည်။
ဘိုးလင်း, အေ (2005) ။ မေးခွန်းတစ်ခုခုသာ - အကယ်၍ မေးခွန်းတစ်ခုသည်အလုပ်ဖြစ်ပါက၊ ကူးစက်ရောဂါနှင့်ရပ်ရွာကျန်းမာရေးဂျာနယ်, 59 (5), 342-345 ။ Doi: 10.1136 / jech.2004.021204 CrossRef, Medline
Clarkson, ဂျေ, & Kopaczewski, အက်စ် (2013) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲခြင်းနှင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အတွက်ဆေးပေးခြင်း။ လက်တွေ့ရောဂါဗေဒ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 37 (2), 128-148 ။ Doi: 10.1177 / 0196859913482330
Clatworthy, ဂျေ, Buick, D. , Hankins, အမ်, Weinman, ဂျေ, & Horne, R. (2005) ။ ကျန်းမာရေးစိတ်ပညာတွင်စပျစ်သီးပြွတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အစီရင်ခံခြင်း - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ ကျန်းမာရေးစိတ်ပညာ၏ဗြိတိသျှဂျာနယ်, 10 (3), 329-358 ။ Doi: 10.1348 / 135910705X25697 CrossRef, Medline
ကွတ်, R. R. (1987) ။ ကောလိပ်ကျောင်းသားတစ် ဦး ၏နမူနာအတွက်ကိုယ်ပိုင်ဖော်ထုတ်စွဲနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်အယှက်။ စွဲလမ်းအပြုအမူ၏စိတ်ပညာ, 1 (1), 55-61 ။ Doi: 10.1037 / h0080429 CrossRef
Davison, C တို့, စမစ်, G. အ,, & Frankel, အက်စ် (1991) ။ ကပ်ရောဂါနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဝိရောဓိကိုဖော်ထုတ်ခြင်း - ကျန်းမာရေးပညာရေးအတွက်သန္ဓေသားလောင်းလောင်းခြင်း၏သက်ရောက်မှုများ။ ကျန်းမာရေးနှင့်အနာရောဂါ၏လူမှုဗေဒ, 13 (1), 1-19 ။ Doi: 10.1111 / 1467-9566.ep11340301 CrossRef
Demetrovics, Z. , & Griffiths, M. (2012) ။ အမူအကျင့်စွဲ: အတိတ်, ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်။ အမူအကျင့်စွဲဂျာနယ်, 1 (1), 1-2 ။ Doi: 10.1556 / JBA.1.2012.1.0 လင့်ခ်
Effertz, တီ, & မန်း, K. (2013) ။ အန္တရာယ်ရှိသောအရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်နီကိုတင်းစွဲခြင်းတို့ပါဝင်သောဥရောပရှိ ဦး နှောက်၏ရောဂါများ၏ ၀ န်ထုပ် ၀ န်ပိုးနှင့်ကုန်ကျစရိတ်။ ဥရောပ Neuropsychopharmacology, 23 (7), 742-748 ။ Doi: 10.1016 / j.euroneuro.2012.07.010 CrossRef, Medline
Freimuth, အမ်, Waddell, အမ်, Stannard, ဂျေ, Kelley, အက်စ်, Kipper, အေ, ရစ်ချတ်ဆန်, အေ, & Szuromi, ဗြဲ (2008) ။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှု - အပြန်အလှန်ရောဂါလက္ခဏာပြမှုနှင့်ပူးတွဲစွဲလမ်းမှုများကိုတိုးချဲ့ခြင်း။ စွဲ & ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အုပ်စုများ၏ဂျာနယ်,3(3-4), 137-160 ။ Doi: 10.1080 / 15560350802424944 CrossRef
Garcia က, အက်ဖ် D. , & Thibaut, အက်ဖ် (2010) ။ လိင်စွဲ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်အလွဲသုံးစားမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 36 (5), 254-260 ။ Doi: 10.3109 / 00952990.2010.503823 CrossRef, Medline
အတင်းအဖျင်း, အမ် (2001) ။ မှီခို၏ဝဘ်။ စွဲ, 96 (5), 677-678 ။ Doi: 10.1046 / j.1360-0443.2001.9656771.x CrossRef, Medline
Granello, H. အိပ်ချ်, & Wheaton, ဂျေအီး (2004) ။ အွန်လိုင်းအချက်အလက်ကောက်ယူခြင်း - သုတေသနအတွက်မဟာဗျူဟာများ။ တိုင်ပင် & ဖွံ့ဖြိုးရေးဂျာနယ်, 82 (4), 387-393 ။ Doi: 10.1002 / j.1556-6678.2004.tb00325.x CrossRef
Grant, ဂျေအီး, Potenza, အမ် N. , Weinstein, အေ, & Gorelick, D. အေ (2010) ။ အမူအကျင့်စွဲနိဒါန်း။ အမေရိကန်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်အလွဲသုံးစားမှုဂျာနယ်, 36 (5), 233-241 ။ Doi: 10.3109 / 00952990.2010.491884 CrossRef, Medline
Haylett, အက်စ်အေ, Stephenson က, G. အအမ်, & Lefever, R. အမ်အိပ်ချ် (2004) ။ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများ၌ Covariation: ပိုမိုတိုတောင်းသော PROMIS မေးခွန်းလွှာကို အသုံးပြု၍ စွဲလမ်းစေသောအရာများကိုလေ့လာခြင်း။ စွဲလမ်းအပြုအမူ, 29 (1), 61-71 ။ Doi: 10.1016 / S0306-4603 (03) 00083-2 CrossRef, Medline
Hellman, အမ်, Schoenmaker, T. အမ်, Nordstrom, ခ R. , & ဗန် Holst, R. ဂျေ (2013) ။ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲခြင်းကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုရှိပါသလား။ စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ စွဲသုတေသန & သီအိုရီ, 21 (2), 102-112 ။ Doi: 10.3109 / 16066359.2012.693222 CrossRef
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသာယာဝပြောရေးအုပ်စု။ (2006) ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသာယာဝပြောမှုအညွှန်း (4th ed ။ ) မှရယူရန် http://www.deakin.edu.au/research/acqol/instruments/wellbeing-index/pwi-a-english.pdf
ဂျွန်ဆင်, အမ်စီ (1999) ။ Cross- စွဲ: မျိုးစုံစွဲ၏ဝှက်ထားသောအန္တရာယ်။ နယူးယောက်၊ နယူးယောက်: The Rosen Publishing Group ။
Karim, R. , & Chaudhri, P. (2012) ။ အမူအကျင့်စွဲ: ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးဂျာနယ်, 44 (1), 5-17 ။ Doi: 10.1080 / 02791072.2012.662859 CrossRef, Medline
ရှငျဘုရငျ, L. အယ်လ်, Delfabbro, P. အိပ်ချ်, & Griffiths က, အမ် D. (2013) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူပုံမှန်ဂိမ်းကစားသူများအကြားပြproblemနာရှိသောဗီဒီယိုဂိမ်းများ၏လမ်းကြောင်းများ - ၁၈ လကြာ longitudinal လေ့လာမှု။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာ၊ အပြုအမူနှင့်လူမှုကွန်ယက်၊ ၁၆ (၁)၊ ၇၂-၇၆ ။ Doi: 18 / cyber.16 CrossRef, Medline
Konkolé Thege, ခ, Colman, ဗြဲ, El-guebaly, N. , Hodgins, C. C. , Patten, အက်စ်ခ, Schopflocher,,, Wolf, ဂျေ, & ကင်မရွန်တောရိုင်း, တီ (2015) ။ ပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်အမူအကျင့်စွဲပြproblemsနာများ: ကနေဒါအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှစ် ဦး ၏စစ်တမ်းများ။ စွဲသုတေသန & သီအိုရီ, 23 (1), 34-42 ။ Doi: 10.3109 / 16066359.2014.923408 CrossRef
Kourosh, အေအက်စ်, Harrington, C. R. , & Adinoff, ခ (2010) ။ တစ် ဦး အမူအကျင့်စွဲအဖြစ် tanning ။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်အလွဲသုံးစားမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 36 (5), 284-290 ။ Doi: 10.3109 / 00952990.2010.491883 CrossRef, Medline
Lawlor, A. အေ, Frankel, အက်စ်, Shaw, အမ်, Ebrahim, အက်စ်, & စမစ်, G. အ ((2003) ။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးမကောင်းခြင်း - ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းရပ်တန့်ခြင်းအစီအစဉ်သည်ချို့တဲ့သောလူများအတွက်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းအစီအစဉ်၏ပျက်ကွက်မှုကိုရှင်းပြပါသလား။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 93 (2), 266-270 ။ Doi: 10.2105 / AJPH.93.2.266 CrossRef, Medline
Lochner, C တို့, Hemmings, အက်စ်အမ်ဂျေ, Kinnear, C တို့ဂျေ, Niehaus, J. ဂျေအိပ်ချ်, Nel, G. G. အ, Corfield, V. အေ, Moolman-Smook, ဂျေစီ, Seedat, အက်စ်, & Stein, J. ဂျေ (2005) ။ obsessive- compulsive ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက် obsessive-compulsive ရောင်စဉ်ရောဂါ၏စပျစ်သီးပြွတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: လက်တွေ့နှင့်မျိုးရိုးဗီဇဆက်စပ်မှု။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု, 46 (1), 14-19 ။ Doi: 10.1016 / j.comppsych.2004.07.020 CrossRef, Medline
MacLaren, V. V. , & အကောင်းဆုံး, အယ်လ်အေ (2010) ။ ငယ်ရွယ်သောလူကြီးများတွင်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများ - ပိုမိုတိုတောင်းသော PROMIS မေးခွန်းလွှာအတွက်ကျောင်းသားစံနှုန်းများ။ စွဲလမ်းအပြုအမူ, 35 (3), 252-255 ။ Doi: 10.1016 / j.addbeh.2009.09.023 CrossRef, Medline
McGinnis, ဂျေအမ်, & Foege, ဒဗလျူအိပ်ချ် (1999) ။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်စွဲစေသည့်အရာများအသုံးပြုခြင်းကြောင့်သေဆုံးမှုနှင့်ရောဂါ။ အမေရိကန်သမားတော်များအစည်းအရုံး, 111 (2), 109-118 ၏တရားစွဲဆိုမှု။ Doi: 10.1046 / j.1525-1381.1999.09256.x CrossRef, Medline
ရွှံ့, တီအီး, Hodgins, C. C. , el-Guebaly, N. , ကင်မရွန်, ဒဗလျူတီ, Colman, ဗြဲ, Patten, အက်စ်ခ, & Schopflocher, D. (2011) ။ အလွန်အကျွံအပြုအမူ Syndrome Conceptualizing: တစ် ဦး ကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်။ လက်ရှိစိတ်ရောဂါကုသမှု,7(2), 138-151 ။ Doi: 10.2174 / 157340011796391201 CrossRef
Rush, ခ, Urbanoski, K. , Bassani, D. , Castel, အက်စ်, & တောရိုင်း, တီ (2010) ။ ကနေဒါရှိပူးတွဲဖြစ်ပေါ်သောပစ္စည်းဥစ္စာများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ - ပျံ့နှံ့မှု၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်မပြည့်စုံသောလိုအပ်ချက်များ။ ဂျေ Cairney & L. အယ်လ် Streiner (။ Eds ။ ), ကနေဒါအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ: တစ် ဦး ရောဂါဗေဒရှုထောင့် (စစ 170-204 ။ ) ။ တိုရွန်တို၊ ကနေဒါ၊ တိုရွန်တိုစာနယ်ဇင်းတက္ကသိုလ်။
Shaffer, အိပ်ချ်ဂျေ, LaPlante, D. အေ, LaBrie, R. အေ, Kidman, R. C. , Donato, အေ N. , & Stanton, အမ် V. (2004) ။ အမျိုးမျိုးသောအသုံးအနှုန်းများ, ဘုံ etiology: စွဲတစ်ခုရောဂါလက္ခဏာမော်ဒယ်ခါနီး။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဟားဗတ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ၁၂ (၆)၊ ၃၆၇-၃၇၄ ။ Doi: 12 /6CrossRef, Medline
Shulman, တီ D. (2003) ။ အချည်းနှီးသောအရာတစ်ခုခု: Shoplifting စွဲနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး။ Haverford, PA: Infinity ထုတ်ဝေရေး။
လူပျို, အီး, ရော့ဘ်ဆန်, အယ်လ်, Xie, X တို့မှာ & Rehm, ဂျေ (1998) ။ ကနေဒါနိုင်ငံရှိအရက်၊ ဆေးရွက်ကြီးနှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များ၊ စွဲလမ်းမှု၊ ၉၃ (၇)၊ Doi: 1992 / j.93-7.x CrossRef, Medline
Stephenson က, G. အမ်, Maggi, P. , Lefever, R. အမ်အိပ်ချ်, & Morojele, N. K. (1995) ။ အလွန်အကျွံအပြုအမူများ - လူနာ ၄၇၁ ဦး မှတင်ပြသောအပြုအမူဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များကိုစွဲလမ်းကုသမှုစင်တာတွင်ဝန်ခံခဲ့သည်။ စွဲသုတေသန & သီအိုရီ, 471 (3), 3-245 ။ Doi: 265 / 10.3109 CrossRef
ပစ္စည်းအလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများအုပ်ချုပ်ရေး။ (2009) ။ သင်၏အစီအစဉ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်း ပူးတွဲဖြစ်ပေါ်ရောဂါများအတွက်ဘက်ပေါင်းစုံကုသမှု။ Rockville, MD: အမေရိကန်ကျန်းမာရေးနှင့်လူသားဝန်ဆောင်မှုများဌာန၊ ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများအုပ်ချုပ်ရေး၊ စိတ်ကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုစင်တာ။ မှရယူရန် https://store.samhsa.gov/shin/content/SMA08-4367/BuildingYourProgram-ITC.pdf
Sussman, အက်စ် (2010) ။ မတ်ေတာစွဲ - အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်၊ လိင်စွဲ & compulsivity, 17 (1), 31-45 ။ Doi: 10.1080 / 10720161003604095 CrossRef
Sussman, အက်စ်, Arpawong, တီ, Sun, P. , Tsai, ဂျေ, Rohrbach, အယ်လ်, & Spruijt-Metz, D. (2014) ။ ယခင်ကအခြားရွေးချယ်စရာအထက်တန်းကျောင်းလူငယ်များအကြားစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများပျံ့နှံ့မှုနှင့်အတူတကွဖြစ်ပွားမှု။ အမူအကျင့်စွဲဂျာနယ်,3(1), 33-40 ။ Doi: 10.1556 / JBA.3.2014.005 လင့်ခ်
Sussman, အက်စ်, Lisha, N. , & Griffiths က, အမ် (2011) ။ အဆိုပါစွဲ၏ပျံ့နှံ့: အများစု၏ပြproblemနာသို့မဟုတ်လူနည်းစု? အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များ၊ ၃၄ (၁)၊ ၃-၅၆ ။ Doi: 34 / 1 CrossRef, Medline
Sussman, အက်စ်, & Moran, အမ် (2013) ။ Hidden စွဲ - ရုပ်မြင်သံကြား။ အမူအကျင့်စွဲဂျာနယ်,2(3), 125-132 ။ Doi: 10.1556 / JBA.2.2013.008 လင့်ခ်
Villella, C. , Martinotti, G. အ, Di Nicola၊ အမ်၊ Cassano, အမ်, La Torre, G. အ, Gliubizzi, အမ်, Messeri, ဗြဲ, Petruccelli, အက်ဖ်, Bria, P. , Janiri, L ကို ။ , & Conte, G. အ (2011) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးများတွင်အမူအကျင့်စွဲခြင်း - ပျံ့နှံ့မှုလေ့လာမှုမှရလဒ်များ။ လောင်းကစားလေ့လာရေးဂျာနယ်, 27 (2), 203-214 ။ Doi: 10.1007 / s10899-010-9206-0 CrossRef, Medline
Widyanto, အယ်လ်, Griffiths က, အမ် D. , & Brunsden, V. (2011) ။ အင်တာနက်စွဲမှုစမ်းသပ်ခြင်း၊ အင်တာနက်နှင့်သက်ဆိုင်သောပြProbleနာနှင့်မိမိကိုယ်ကိုရောဂါရှာဖွေခြင်းတို့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ Cyberpsychology, အပြုအမူနှင့်လူမှုကွန်ယက်, 14 (3), 141-149 ။ Doi: 10.1089 / cyber.2010.0151 CrossRef, Medline
Willoughby, တီ, Chalmers, အိပ်ချ်, & Busseri, အမ်အေ (2004) ။ အဆိုပါရောဂါဘယ်မှာလဲ? မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်မျိုးစုံပြproblemနာအပြုအမူများအကြား Co- ဖြစ်ပျက်မှုဆန်းစစ်။ အတိုင်ပင်ခံနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 72 (6), 1022-1037 ။ Doi: 10.1037 / 0022-006x.72.6.1022 CrossRef, Medline
Wong က, U. , & Hodgins, C. C. (2014) ။ လူကြီးများအတွက်ဂိမ်းစွဲစာရင်းပြုစုခြင်း (GAIA) ။ စွဲသုတေသန & သီအိုရီ, 22 (3), 195-209 ။ Doi: 10.3109 / 16066359.2013.824565 CrossRef